Charles Dickens. Murume akatanga Kisimusi. | Zvazvino Zvinyorwa
Ngatizvitarisei. Kisimusi isina Charles Dickens haisi Kisimusi kana chero chinhu. Kisimusi isina iye mr scrooge, mumwe wake Jakob marley, muzukuru wake ane hunhu hwakanaka, mushandi wake akasiya basa Bob cratchit uye pasina iye shoma tim haisi kisimusi. Uye zvechokwadi pasina zvipoko zveKisimusi Zvekare, Zvezvino neRamangwana. Hakuna Kisimusi asina iye Krisimasi nhau yemunyori wechiChirungu, mumwe weakanyanya kwazvo mumabhuku epasirese, kwete chete Saxon.
Yakaburitswa bhaisikopo idzva nezve chimiro chake uye akaronga sei nyaya yake isingafe kana pasina mubvunzo zvakanyanya kufarirwa. Murume akatanga Kisimusi Iyo nyeredzi Dan Stevens, Christopher Plummer naJonathan Pryce pakati pevamwe. Uye iyo yegumi nemana nhevedzano iyo BBC (of course) yakagadzirira mazuva aya iri kumirirawo. Isu tinopa kumwe kutendeuka kune ino yakakosha klassiske uye iyi itsva firimu vhezheni yepamuviri pake.
2 Iyo bhaisikopo
3 Chiratidziro muLondon. Mweya weimwe pfungwa: Kuziva A Christmas Carol.
Ehe Dickens Haana kugadzira Kisimusi, asi kuburikidza nenyaya iyi akakwanisa kuitazve kana kuiwanazve. Akamaka kana kuziva kutapudza uye kurondedzera zvakateedzana zvakateedzana, zvimiro kana magadzirirwo akaiswa kana kugadzirwa kwemafashoni kumutenda.
Akanyora Krisimasi nhau zvakanaka pamberi peKisimusi 1843 uye mairi aida kutora ndangariro dzake kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweEngland. Ikoko, kumaruwa kwaakakurira, kwaive nepiyano kwairidzwa macarols uye amai vake vakabika turkey pachinzvimbo chehansi. Izvo zvakare zvinoda kuziva kuti yakanaya chando yakawanda uko chando dzaiwanzo nyoro. Uye chando ichocho, chiri kwese kwese munhoroondo, chingadai chatove chinhu chakakosha mune dzimwe nyaya dzaizoburitswa mumashure.
Krisimasi nhau iri zvakare iyo kushoropodzwa munharaunda kubva kuDickens kusvika kumamiriro ezvinhu akaomarara aakawana parwendo rwekuenda kuManchester kwaakaona kuoma kwevashandi. Yakatanga se chinyorwa chekumhan'arira kunyanya kushungurudzwa kwevashandi vevana. Uye yakaguma iri nyaya ine dingindira, manzwiro uye manzwiro achiripo chaizvo mushure memakore zana nemakumi manomwe.
Kubudirira kweruzivo kwaive nekukurumidza uye hombe kwazvo uye dzakatengeswa 6.000 makopi muvhiki yekutanga. Dickens aiziva kubatana nezviuru zvevagari vemo avo, saiye, vakarangarira nechishuvo cheKisimusi yakapusa, kure nemafekitori, zvitima zvemhepo, kusvibiswa uye kusararama mamiriro.
Yakaburitswa muUnited States neUnited Kingdom, asi pano hazvizivikanwe kuti rinosvika riini kana kuti riini. Izvi zvichibva pabhuku naLee Standiford zita risingazivikanwe. Taura nyaya iyi nekubata kwemashiripiti kwaaipfeka kune yakasikwa Ebenezer Scrooge (Christopher Plummer), mudiki Tim nevamwe vakasarudzika vatambi ve Krisimasi nhau.
Iwo aive masvondo matanhatu umo munyori akapfuura nepakati pekukosha Bump mune rake basa mushure mekundikana kwemabhuku ake matatu ekupedzisira, uye vaparidzi vakuru vakaramba pfungwa yake yenyaya yakatarisana neKisimusi. Inotungamirwa na Bharat nalluri uye inotiratidza kuti Dickens (Dan Stevens) akasanganisa hupenyu chaihwo kurudziro nemafungiro ake akajeka kurongedza iwo asingakanganwiki mavara uye yatova isingagumi ngano.
John Dickens - Jonathan Price
Chiratidziro muLondon. Mweya weimwe pfungwa: kutsvaga nyaya yeKisimusi.
Chiratidziro chakapihwa ku 48 Doughty Street iri pakati peBloomsbury nharaunda muLondon. Zvanga zviri Imba yekutanga yemhuri yaDickens, uyo akatamira ikoko muna 1837 nemukadzi wake Catherine nemwana wavo wekutanga. Akanga ari mutori wenhau achishandisa zita rekunyepedzera Boz.
Mune ino imba-miziyamu inosangana iro rakakura muunganidzwa wezvinhu uye zvemunhu zvinhu zvemunyori wenhau nemhuri yake uye inoramba ichiwedzera zvitoro nekuti hapana nzvimbo yakakwana yekuratidza zvese. Zvipfeko zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa nevatambi vemufirimu zviri kuratidzwawo. Chiratidziro chichava payakavhurwa kusvika Kukadzi 25, 2018. Chimwezve chikonzero chekushanyira London.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Charles Dickens. Murume akatanga Kisimusi.
Jessica Maple akadaro
Iwe nemukana chero upi zvawo unoziva kana firimu iri rakatopihwa muLatin America? Ndanga ndakamirira iyi bhaisikopo kubva gore rapfuura. Chandinonyanya kufarira kuona paKisimusi ishanduro dzakasiyana dzakaburitswa mune ino inoshamisa nyaya, yekutanga yandakaona yaive vhezheni yeLooney Toons uye chandinofarira ndiko kunoitwa naBill Murray.
Pindura kuna Jessica Arce
Waizviziva ...? Krisimasi nemabhuku ...